ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုစင်တာ (Check-up) | ဘမ်ရွန်ဂရက် ဆေးရုံကြီး
AR - العربيةDE - DeutschEN - EnglishID - BahasaJP - 日本語TH - ไทยZH - 中文(简体)KH - Cambodia
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ဘမ်ရွန်ဂရက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီး၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု စင်တာသည် နှစ်စဉ် လူနာပေါင်း ၆၀၀၀၀ ကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသော ဒေသအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသည့် စင်တာများထဲမှ အကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသည့်စင်တာသည် ဘမ်ရွန် ဂရက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီး၏ ကျယ်ပြောလှသော ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ရောဂါကာကွယ်ရေးဆေးပညာ အထူးကုဆရာဝန်များဖြင့် ဖြည့်ဆည်းထားပါသည်။
သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်ကို ရွေးချယ်ရန် နည်းလမ်း ၂ မျိုးရှိပါသည်။
၁။ လူအများစုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဈေးသင့်တော်သော ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသည့် အစီအစဉ်များကို ရွေးချယ်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်ရှိ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု အစီအစဉ်နှိုင်းယဉ်ပြခြင်း စာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
၂။ သင့်မိသားစုကျန်းမာရေးရာဇဝင် (သို့) သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအပေါ်မူတည်၍ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကို သင်လိုအပ်သလိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ မည်သည့် အစီအစဉ်နှင့် မည်သည့်ဖြည့်စွက်စစ်ဆေးမှုများသည် သင်နှင့်သင့်တော်မှုရှိသည်ကို ရွေးချယ်ရာ၌ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာကို ဖြေဆိုပေးပါ။
သင်၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် သင်ပြသနေကျဆရာဝန် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ အထွေအထွေရောဂါအထူးကုသမားတော်များနှင့်လည်း မည်သည့်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သင့်သည် (သို့) သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံး စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်မှာ မည်သည်ဖြစ်သည်ကိုသိရှိရန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရက်ချိန်း စာမျက်နှာပေါ်တွင် သင်၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအတွက် ရက်ချိန်းကို လွယ်ကူစွာ ရယူနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်အစီအစဉ်အား ပြုလုပ်လိုကြောင်းကို ဖော်ပြပါ။ ဖြည့်စွက်အစီအစဉ်များအကြောင်း (သို့) သီးသန့်စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်အကြောင်း စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစရာရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ စုံစမ်းမေးမြန်းရန် စာမျက်နှာမှတဆင့် အွန်လိုင်းမက်ဆေ့ချ် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းအတွက်မည်သို့ပြင်ဆင်ရန်နှင့် စစ်ဆေးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်များ စသည့် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို အောက်ပါလင့်ခ်များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုစင်တာ ရှိ ဆရာဝန်များသည် ဆေးပေးခြင်း (သို့) ဖြစ်နေသည့်ရောဂါအား ကုသမှုပေးခြင်း မပြုလုပ်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သိထားစေလိုပါသည်။ စစ်ဆေးပြီးနောက် ထပ်မံပြသရန်အခြေအနေများရှိနေပါက အထူးကုနှင့်ပြသရန် လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအထူးကုဆရာဝန်မှ သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုမိုပြည့်စုံစွာ သုံးသပ်ကာ သင့်တော်သည့်ကုသမှုကိုယူရန် အကြံပေးပါမည်။ ထိုအခါတွင် ထပ်မံစစ်ဆေးမှုများ (သို့) ဆေးပေးခြင်းများ ပါဝင်ပါလိမ့်မည်။
စစ်ဆေးချက်များအားလုံးအတွက် ကွန်ပျူတာဖြင့် အစီရင်ခံစာများထုတ်ပေးပြီး သင်၏ဓာတ်မှန်ပုံရိပ်များကို ရယူလိုပါက စီဒီပြားဖြင့်ကူးယူပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကင်ဆာညွှန်းကိန်းများအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပေးခြင်း
o အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်း ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ မီးယပ်အထူးကုများမှ သားအိမ်ခေါင်းစစ်ဆေးခြင်း
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ မျက်စိအထူးကုများမှ မျက်စိစမ်းသပ်ခြင်း
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုစင်တာသည် ထိပ်တန်းထိုင်းနှင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားသံရုံးများစသည့် အဖွဲ့အစည်း ၁၀၀၀ ကျော်အား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ ဘမ်ရွန်ဂရက်ဆေးရုံကြီးတွင် အုပ်စုလိုက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အုပ်စုလိုက်စစ်ဆေးမှုနှုန်းထားများအတွက် ကျေဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအရောင်းဌာန
၆၆ (၀) ၂၆၆၇ ၁၃၉၃ သို့ဆက်သွယ်ပါ။
အခြာအထူးကုဌာနများတွင် ရရှိနိုင်သော ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ကျန်းမာသန်စွမ်းရေး ဝန်ဆောင်မှုများ
o DEXA အရိုးသိပ်သည်းဆ စစ်ဆေးခြင်း
o ဆေးရောင်ထည့်ကြည့်သော အာလ်ထရာဆောင်းနှင့် သွေးကြောဓာတ်မှန်ခြင်း
o အမ်အာအိုင် (1.5 Tesla) နှင့် စီတီစကင်
o ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အဆီရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပျံ့နှံ့မှုတွက်ချက်ခြင်း
အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဌာန ၏ စစ်ဆေးမှုများ
နှလုံးဌာန ၏ စစ်ဆေးမှုများ
o ဟော်တာစက်တပ်၍ ၂၄ နာရီ နှလုံးလုပ်ဆောင်မှုအား စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း
သွားဌာန တွင် သွားစစ်ဆေးမှုများ
ဓာတ်မတည့်ကုဌာန တွင် အဆုတ်လုပ်ဆောင်ချက်စစ်ဆေးခြင်း
နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းဌာန တွင် အကြားအာရုံစစ်ဆေးခြင်း
အမျိုးသမီးဌာန ရှိ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ
o သွေးဆုံးခြင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း
အရေပြားဌာန ရှိ ဝန်ဆောင်မှုများ
ယဉ်ကျေးမှုအရ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သော အမျိုးသား၊ အမျိူးသမီး ဆရာဝန်များ
ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်နှင့် စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန် သီးသန့်စမ်းသပ်ခန်းများ
အီးစီဂျီနှင့် ပြေးစက်ပေါ်တွင်ပြေး၍ နှလုံးစမ်းသပ်ခြင်း
အမျိုးမျိုးသော ပုံရိပ်ရိုက်စစ်ဆေးစက်များနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများ
ကျား/မ အဝတ်လဲခန်းများနှင့် ရေချိုးခန်းများ
Assoc.Prof.Dr. Kanitha Patarakul, Ph.D.
Assoc.Prof.Dr. Krit Pongpirul, Ph.D.
AVM.Dr. Perapong Puyanont
AVM.Dr. Taweesak Kantirat
Dr. Anon Kochaprasert
Dr. Kae Hyakutake
Dr. Kirada Thirawattanakul
Dr. Kochakorn Panomtham
Dr. Kriangkrai Sothonchai
မြန်မာပြည်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်ရုံးသို့ ခေါ်ဆိုရန်။
Daily 6:30 am to 3:00 pm
Building A, 11th floor
Rating score 9.31 of 10, based on 118 vote(s)